ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အိမ်ထောင်၏ပွိုင့်ဆိုတာဘာလဲ?
အားဖြင့် Veranda Hillard
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 26 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
အပြင်ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်မှ, အစဉ်အလာ, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်ရာသက်ပန်ကတိကဝတ်ခဲ့ရန်အားထုတ်မှုမှာလက်ထပ်ကလူ. နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်အကုန်ကတည်းက, လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှာကျဆင်းမှုများရှိခဲ့သည်နှင့်, ခြုံငုံ, လူတွေနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ယခင်အစဉ်အဆက်ထက်လက်ထပ်လေ့. အခုအသစ်လမ်းကြောင်းသစ်နေသော်လည်း, Kefalas et. အမှ. ထိုဆောင်းပါး၌ "မင်္ဂလာဆောင်အတူတကွဖြစ်ခြင်းထက်ပိုဖြစ်၏" , ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်မင်္ဂလာကိုတန်ဖိုးထားနှင့်၎င်းတို့၏အနာဂတ်တစ်ခုကျိုးနပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်ကိုဆက်လက်ကပြောပါတယ်. ယနေ့တွင်, အစားအထုံးကိုချည်ထားခြင်းထက်ကိုရွေးချယ်ဖို့တခြားဖွယ်ရာတစ်မူထူးသွားရာလမ်း၌ရှိစေခြင်းငှါ, သို့သော်, မင်္ဂလာဆောင်မှာမှရရှိလာမဲ့အကျိုးအမြတ်များစွာရှိနေပါသေးသည်.
မင်္ဂလာဆောင်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုလူသားတွေ '' အရေးကြီးသည်လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံ. အကောင်းဆုံးကတော့, ဇနီးမောင်နှံများအတွက်အတူတကွဘဝတွေ့ကြုံခံစားကြပြီးအိုမင်းအဖြစ်သူတို့အနားမှာတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူကြသည်. ခံ့နှင့်. al ။ ,, စာအုပ်ကို "ဒီမင်္ဂလာဆောင်နှင့်မိသားစု, အတွေ့အကြုံများအတွက်: တစ်ဦးပြောင်းခြင်း Society မှာရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး "မင်္ဂလာဆောင်နှင့်မိသားစုဘဝပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုနှင့်ထောက်ခံမှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံမှသတင်းရပ်ကွက်များဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါ. မင်္ဂလာဆောင်မှတဆင့်, နှစ်ခုပေါင်းအဘော်တို့သည်အနာဂတ်အဘို့မိမိတို့ရင်းနှီးသောမျှော်လင့်ချက်နှင့်အိပ်မက်မျှဝေနှင့်အသက်အတွေ့အကြုံများအားစိန်ခေါ်နေစဉ်အတွင်းနှစ်သိမ့်တွေ့စေခြင်းငှါ.
မင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသောသူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်လူများနှစ်မျိုးစလုံးကမ်းလှမ်းယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပိုတဲ့အကြောင်းအရာများမှာ. ထို့အပြင်, အိမ်ထောင်ရေး၏လူမှုရေးအထောက်အပံ့ရှုထောင့် terminal ကိုရောဂါမှအကာအကွယ်ပေးအကြောင်းရင်းများပံ့ပိုး. သုတေသီများနှင့် Aizer. al ။ ,, လေ့လာချက် "အိမ်ထောင်ရေး Status နဲ့ Survival ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာများ၏" အတွက်, အိမ်ထောင်သက်လူကင်ဆာရောဂါဖြင့်တင်ဆက်ရန်နည်းပါးသွားကြောင်းတွေ့ရှိ, ကုသမှုခံယူဖို့ပိုဖွယ်ရှိ, လက်မထပ်ရသေးသူလူတွေထက်ရောဂါမှသေဆုံးရန်နှင့်လျော့နည်းဖွယ်ရှိ. ဒီကင်ဆာအမျိုးမျိုးကိုများအတွက်မှန်သည်, ထိုကဲ့သို့သောရင်သားကင်ဆာအဖြစ်, အဆုတ်, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ, အူမကြီးနှင့်အခြား terminal ကိုရောဂါများ.
မင်္ဂလာဆောင်တစ်ဦးကလေးကလေးများကိုကျွေးမွေးပြုစုအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့နေဆဲယနေ့ထိုရည်ရွယ်ချက်တွင်လုပ်ကျွေး. ကတယောက်ထဲကလေးတစ်ဦးမြှင့်ဖို့ဆက်ဆက်နိုင်ပေမဲ့, တရားမျှတပိုကောင်းမိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူဘိုးဘွားရိပ်သာတွင်ကြီးပြင်းလာသောအခါကလေးများ. လေ့လာမှုမှာ, "ဝင်ငွေနည်းသောမိခင်များ’ မိတ်ဖက်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်အရွယ်ရောက်စပုံစံများ’ လူမှု-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပြီ-ပုဂ္ဂိုလ်သည် ", Bachman နှင့်. အမှ. သားသမီးတစ်ဦးနှစ်ဦးကိုမိဘအိမ်သူအိမ်သားပြပွဲတွင် Single-မိဘသို့မဟုတ် cohabitating အိမ်ထောင်စုပေါင်းထမြောက်သောအခါကလေးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွင်းလျော့နည်းဆိုးသွမ်းနှင့်သရုပ်ဆောင်ထဲကအပြုအမူတွေကိုပေါက်သောသူပြော. ထိုကဲ့သို့သောဖခင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်နည်းပါးလာစီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုများအဖြစ်နှစ်ခုမိဘအိမ်သူအိမ်သားအတွက်လက်ဆောင် Elements ကကလေးများဖွံ့ဖြိုးဆဲသောကြောင့် သာ. ကြီးမြတ်သောတည်ငြိမ်မှုကိုပေး.
မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်လက်မထပ်ရသေးသူဖြစ်ခြင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးကမ်းလှမ်း. ဘေးဖယ်နှစ်ခုအလုပ်အကိုင်များတစ်ခုထက်ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတကယ်တော့မှ, အိမ်ထောင်သက်ကလူအတော်များများသည်စီးပွားရေးအားသာချက်များရှိသည်. အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများပိုမြန်လက်မထပ်ရသေးသူလူတွေထက်စည်းစိမ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများစုဆောင်းမိလာ. ဖြည့်စွက်ကာ, ဆောင်းပါးထဲမှာ "ငါ ... Save စေချင်ပါနဲ့", Knoll နှင့်. အမှ. ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ဇနီးမောင်နှံများအတွက်တစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းစီထက်အလုပ်ရှင်-based အငြိမ်းစားအကောင့်အထောက်အကူပြုဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်. ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအစောပိုင်းအသက်တာ၌စီးပွားရေးအနေအထားတစ်ခုခန့်မှန်းကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနောက်ပိုင်းတွင်ဘဝ၌ဤအချက်တစ်ချက်အိမ်ထောင်သက်သည်လူများအဘို့အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်.